Imikhwa yemibala yeKhathuni-Iingcebiso zokuKhetha eyona Khaphethi yeKhaya - Carpet Color Trends
Home » Imikhwa yemibala yeKhathuni-Iingcebiso zokuKhetha eyona Khaphethi yeKhaya
Imikhwa yemibala yeKhathuni-Iingcebiso zokuKhetha eyona Khaphethi yeKhaya
Ikhaphethi yenye yezinto ezihonjiswa phantse yonke imihla kwikhaya ngalinye. Ukuze ukhetho lubhalwe ngokuchanekileyo, qala ngokujonga iingcebiso malunga nokukhetha ikhaphethi efanelekileyo apha ngezantsi. Well, uyazi ukuba phantse yonke indlu isebenzisa ikhaphethi?
Ngoku, unokuthathela ingqalelo imeko yegumbi eya kuba eyahlukileyo kwikhaphethi. Ikwaxhomekeke kumbala kunye motif wekhaphethi ekhethiweyo. Kuya kuvela ukuba uyihombise indlu ngokulula usebenzisa iindidi ngeekhaphethi. Ngaba ufuna ukufumana olona hlobo luhle kunye nekhaphethi yendlu? Makhe sijonge iingcebiso malunga nokukhetha ikhaphethi apha ngezantsi.
Imibala yeKhaphethi Umbala weendlela zokuBonisa wena
Zeziphi izinto zekhaphethi ozaziyo? Kuyabonakala ukuba kukho izinto ezintlanu zekhaphethi, uyazi. Ngamanye amaxesha sithenga iikhaphethi njengoko sinqwenela ngaphandle kokwazi ukuba loluphi uhlobo. Nazi iintlobo ezintlanu zeekhaphethi kunye neendlela zombala weKhathuni:
Imibala eqaqambileyo engathathi hlangothi ngakumbi izisa ukubonakala kokukhanya kwaye kulula ukudibanisa kwigumbi
Imibala emnyama ibonakalisa into enzima kodwa intle ngakumbi kwigumbi
Imibala ebambekayo enjengeyityheli kunye nepinki izisa kamnandi, ichwayitile kwaye ayithathi cala kwigumbi
Umbala womlotha unokunika amandla obuhle nakweyiphi na indawo
Luhlaza okwesibhakabhaka kunika umbono woxolelaniso kunye nopholileyo wentliziyo
Umbala obomvu ufuzisela i-eroticism, amandla kunye nomnqweno
Ii-nuances eziluhlaza zendalo zinokubonelela ngemeko yokuphola, ukuphumla kunye nemvisiswano enokuthoba ingqondo
Umbala omhlophe ubonakalisa ukubonwa kucocekile, kucacile kwaye kucocekile
Umbala omnyama ulunge kakhulu ukuveza umbono wento, ubunzulu kunye nemfihlakalo encinci
Imikhombandlela yemibala yeKapeti kunye neNdidi ezifanelekileyo kwiGumbi lakho
Iziphumo zekhaphethi kwigumbi azikho nje ekusebenzeni kwazo okanye njengomhlobiso. Olo khetho lumbala wekhaphethi ofanelekileyo luyimfuneko kakhulu ekuqinisekiseni imeko yemeko yokusebenza kunye nasemva kokuba ifakiwe. Kungenxa yokuba umbala wale khaphethi uyakwazi ukuyenza imozulu kwaye yongeze ixabiso lobuhle kwigumbi.
# 1: Udidi lwekhaphethi Wool
Ngokuqinisekileyo uyavuma ukuba esi sinongo sinye sesona sixhobo sithandekayo. Khawufane ucinge ulele kwikhaphethi eyenziwe ngoboya. Wowu, iya kuhlala kamnandi. Ukuhambelana nentuthuzelo yayo, ikhaphethi yoboya ngokuqinisekileyo iyabiza kakhulu. Nangona zibiza kakhulu, Nazi ezinye izibonelelo:
-Kumnandi kakhulu ukuyisebenzisa
Ukucoca ikhaphethi yoboya? Ukulula, kufuneka usebenzise isicoci nje okanye ucocekile owomileyo.
# 2: Iindidi zeekhaphethi zesilika
Ngubani ongaziyo isilika? Ngokuqinisekileyo le nto inye inika intuthuzelo ngakumbi xa ithelekiswa noboya. Ukuthambeka kwayo kuthambile kwenza isilika ibemnandi kakhulu. Ke, ungayicoca njani le khaphethi intle? Kuyafana nokucoca ikhaphethi yoboya, ikhaphethi yesilika nayo icocwa kusetyenziswa isicoci se vacuum.
# 3: Iindidi zePolypropylene Carpet Equipment
Ngaba ukhetha iiragi zokwenziwa? Ukuba kunjalo, kuya kufuneka ukhethe uhlobo lwePolypropylene okanye ikhaphethi yePP. Nangona zenziwe ngezinto zokwenziwa, olu hlobo lwekhaphethi lunombala ococekileyo. Kuba oku kwenziwa ngezinto zokwenziwa, ngokuqinisekileyo ixabiso elifanelekileyo. Kukho ixabiso, kukho umgangatho weempahla.
Oku kukwasebenza nakwimigca yePolypropylene. Ixabiso lixabiso eliphantsi ukwenza ikhaphethi ngolu hlobo lunesiphene esiliqela. Nazi iimpazamo:
Umbala uphela ngokukhawuleza
Imisonto yekhaphethi ihamba lula
Ingakumbi kule nto yecapeti, unokuyihlamba usebenzisa amanzi.
# 4: Iindidi zeeklasikhi zeNylon
Olu hlobo lwekhaphethi lunokufana kunye nePolypropylene yohlobo lwekhaphethi. Ukufana kukwizixhobo zekhaphethi. Nangona kunjalo, izinto ze-nylon zikwinqanaba elinye elingaphezulu kwendawo ye-Polypropylene. Oku kunokuvakala kwinto efana noboya.
Ewe, olu hlobo lwekhaphethi yenylon luya kulungela wena othanda imozulu eliqaqambileyo. Ngoba? Ngokwesiqhelo, uhlobo lwekhaphethi yenylon inemibala ethandekayo. Ukuba nezinto ezifanayo nohlobo lwangaphambili lwekhaphethi, i-nylon ikhaphethi inokuhlamba ngamanzi.
# 5: Iindidi zeKati zeSisal
Le nyewe ingasazinto kubantu abaninzi. Yintoni impahla yesasari? Kuyavela ukuba njengoko igama lisitsho, le nto inye yekapethi iphuma kwisityalo ekuthiwa sisal. Izixhobo zendalo zenza ubumnandi bekhaphethi bucebe. Ewe kunjalo, oku kwenza ikhaphethi ekwi-sisal iphephe kakhulu ukuba ingasetyenziswa.
Ungaze uhlambe ikhaphethi esetyenziswa usebenzisa amanzi
Yicoca ikhaphethi ngokucoca vacuum
Ngoku ziindidi ezintlanu zemathiriyeli ekhaphethi
# 6: Iindidi zekhaphethi ezibonisa iinkuni
Kholwa okanye ungakholelwa, ubuchwephesha bobuchwephesha buye bangena kwikhathuni. Ubungqina kukuba, ngoku kukho ikhaphethi efana nomgangatho. Ewe, imbonakalo yeli khaphethi ifana nomthi, imarble, kwaye ezinye zifana neceramics. Ukuba usebenzisa ikhaphethi ngolu hlobo, kungcono ukuyidibanisa nokusebenzisa izibuko ezinkulu kwikona nganye yegumbi.
Ngoba? Ubukho besipili bunokufihla indawo ekhoyo. Igumbi liya kujongeka libanzi ngakumbi kwaye ikhaphethi iya kuma ngakumbi.
Ke, yonke imalunga neCarpet Colour Trends yakho. Ndiyathemba ukuba olu lwazi luluncedo kuwe. Ungaqala ukuphonononga zonke izimvo zekhaphethi ngeendlela zakho zombala weKhathuni ozithandayo. Ke, yonwabela ukuhombisa ikhaya lakho othandekayo ngokukhetha ikhaphethi efanelekileyo!
Paint Colors For Kitchens With Gold
Island Colors Boucle Medium Gully G